नेदरल्याण्ड्सलाई हराउँदै चेक रिपब्लिक क्वाटरफाइनलमा « Yoho Khabar
काठमाडौँ – यूईएफए युरो कपको प्रि-क्वाटर फाइनल अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा चेक रिपब्लिकले नेदरल्याण्ड्सलाई पराजित गरेको छ । हंगेरीको बुडापेस्टस्थित पुस्कस एरेनामा भएको खेलमा चेक रिपब्लिकले नेदरल्याण्ड्सलाई २-० गोल अन्तरले हराएको हो ।
चेक रिपब्लिकले शुरुदेखि नै दबाबका साथ खेल प्रस्तुत गरेका थियो । पहिलो हाफको खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो । खेलको ५५ औँ मिनेटमा म्याथियस डि लिटले रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि नेदरल्याण्ड्स १० खेलाडीमा सीमित भयो। त्यसपनि भने नेदरल्याण्ड्स झनै दबाबमा पर्‍यो ।
खेलको ६८ औँ मिनेटमा टोमस होल्सको गोलमार्फत चेक रिपब्लिकले अग्रता बनायो । ८० औँ मिनेटमा प्याट्रिक सिकले अर्को गोल थप्दा चेक रिपब्लिकले खेल २-० ले आफ्नो पक्षमा पार्‍यो । अब चेक रिपब्लिकले क्वाटरफाइनलमा डेनमार्कको सामना गर्नेछ ।
इजरायलमा १ हजार नेपालीका लागि रोजगार खुल्यो, यस्ता छन् मापदण्ड
उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार हुने संकेत, बन्द भएको हटलाइन सेवा सुरु
टोकियो ओलम्पिकमा जापानलाई पछि पार्दै अमेरिका पुग्यो शीर्ष स्थानमा
जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका पौडी खेलाडी एलेक्स शाहले आज प्रतिष्पर्धा गर्दै
किन तनाव दिइयो राष्ट्रिय फुटवल टोलीका प्रशिक्षक अलमुताइरीलाई ? राजीनामा फिर्ता होला ? (भिडियोसहित)
नेपालमै हुने महिला एसियन कपको तयारी तीब्र, नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा (भिडियोसहित)
काठमाडौँ – नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भएको जम्माजम्मी ६ वर्ष पुग्न थालेको छ । तर संविधानका खासखास राजनीतिक प्रावधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआउदै तीव्र विवादमा